दलित मुक्तिको बाधक सामन्ती राज्य सत्ता : सन्दर्भ २१ मार्च अन्तराष्ट्रिय दिवस « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » दलित समाचार » दलित मुक्तिको बाधक सामन्ती राज्य सत्ता : सन्दर्भ २१ मार्च अन्तराष्ट्रिय दिवस
दलित मुक्तिको बाधक सामन्ती राज्य सत्ता : सन्दर्भ २१ मार्च अन्तराष्ट्रिय दिवस
चैत ९, धरान, जागरण मिडिया सेन्टर ।
हिन्दु वर्णाश्रम जन्य सामन्ती राज्यसत्तानै दलित मुक्तिको समस्याको मुख्य बाधक रहेको चर्चा गर्दै दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकताबद्ध रुपमा अघि बढाउने दलित अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् । ५० औं अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस (२१ मार्च) को सन्दर्भमा दलित सेवा संघ सुनसरीद्वारा आयोजित दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफनो अधिकार आफैले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
जातिय विभेद दिवसलाई जितको दिन भनेर सम्झिए पनि नेपाल दलित समुदायमा विभेद कायमै रहेको दाबी गरेका छन् । राज्य संचालनमा ब्राम्हणवादी सोचको हावी भएकाले जातिय विभेद कायमै रहेको दलित सेवा संघका केन्द्रिय सहअध्यक्ष रमेश गजमेरले बताए । उनले भने, राज्यले कानुन बनाए पनि कार्यन्यवनमा चासो दिएको छैन् । जबसम्म राज्य संचालकहरुको ब्राम्हणवादी सोचमा परिवर्तन आउँदैन तब सम्म दिवसको औचित्य नरहेको उनको दाबी छ । दिवसलाई विजयको दिन भन्दा पनि कालो दिनको रुपमा लिनुपर्ने बताए । आन्दोलनबाटै दलित समस्या हल गर्नकालागि गजमेरले समुदायलाई अपिल गरे । एकता, संघर्ष र रुपान्तरणको विधिबाट मात्र दलित मुक्ति हुने चर्चा गर्दै दलितहरु एकिकृत रुपमा आन्दोलित हुनुको विकल्प नरहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख रबिलाल पन्थले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सशक्तिकरणको आवश्यक्ता रहेको औल्याएका छन् । चेतना पुगेको स्थानमा परिवर्तन भएको छ त्यसैले जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्ने बताए । राज्यको संयन्त्रबाट मात्रै नभई गैह्र सरकारी संस्थाहरुले सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । अन्तरक्रियामा सहभागि दलित अधिकारकर्मीहरुले जिल्ला प्रशासक पन्थलाई दलित समुदायका मुद्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । दलित मुद्धाहरु प्रशासनबाटै ओझेल पर्ने गरेको गुनासो गरे । कार्यक्रममा ईलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख डिएसपी सिदम कुमार सिजापती, ईलाका प्रशासन कार्यालय धरानका प्रमुख सिताराम कार्की, दलित साहित्यकार मञ्च सुनसरीका अध्यक्ष केशव सुनाम, ब्राम्हण समाज धरान नगर समितिका अध्यक्ष उद्धव प्रसाद अधिकारी लगायतले दलित एकता आवश्यक रहेको बताए । समाज परिवर्तनमा चेतनाको अभावका कारण छुवाछुतका घटना भईरहेको उनीहरुको भनाई छ । संघका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष मणिराज सुनामको सभापतित्वमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धरान, ईटहरी, महेन्द्रनगर, बराहक्षेत्रबाट दलित अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यसै गरि दिवसको अवसरमा दलित उत्थान समन्वय समिति धरानले शनिबार बिहान प्रभातफेरी र साँझ दिप प्रज्वलन कार्यक्रम गरेको छ । धरान उप महानगरपालिका कार्यालयको मुल गेटबाट शुरु भएको प्रभात फेरी भानुचौकमा आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो । कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै सुनसरी क्षेत्र नं. १ का सभासद कृष्ण कुमार राईले विभेद विरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउनु पर्ने बताए । उनले भने, नियम कानुन त बन्यो तर कार्यान्यवन हुन सकेन । कानुन कार्यान्यनका लागि अभियानलाई सशक्त बनाउनु पर्छ उनले भने । कोण सभामा प्रगतिशिल प्राध्यापक संघ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका अध्यक्ष हरि प्रसाद दाहालले मानिसले बनाएको विकृति र विसंगतिको विरुद्ध सबै जना एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, यो समस्या दलित समुदायको मात्रै होईन, देश विकाश संग जोडिएको मुद्धा हो । आम नागरिक विभेद विरुद्धको आन्दोलनमा जुट्नु पर्ने बताए । प्रभातफेरीमा जातिय विभेदको अन्त्य भएको सांकेतिक रुपमा ५० वटा बेलुन उडाएको थियो ।
Source : Nepal Dalit info
By जागरण मिडिया सेन्टर in दलित समाचार on March 23, 2015 .
← मुसहर बस्तीका घर एसएसबीले भत्काइदियो	अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवस २१ मार्चको शन्दर्भमा प्रेस विज्ञप्ती →